Uyenza njani iAkhawunti yeTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani iakhawunti yeTelegram?
Epreli 28, 2021 0 IiCententarios 374
Ngakumbi nangakumbi abantu bayakhuthazwa ukuba benze iakhawunti kwiTelegram, isicelo esithandwayo sokuthumela imiyalezo ngokuqhubekayo nesothusa abasebenzisi bayo ngezixhobo ezahlukeneyo. Ngaba awukabhalisi eqongeni? Ungayenza namhlanje, kwaye apha sichaza eyona ndlela ilula yokwenza.
Abantu abanqwenela ukukhuphela usetyenziso kunye nokwenza iakhawunti kwiTelegram banokwenza ngokukhululekileyo nangendlela elula. Okwangoku iqonga livumela ukufikelela kulo ngaxeshanye kwizixhobo ezahlukeneyo. Uya kuba nakho ukwenza iakhawunti kwimizuzwana embalwa.
Yocingo: Yenzelwe ntoni
Ukuba ulapha kungenxa yokuba unomdla kwimbono yokuba nakho ukwenza iakhawunti kwisicelo seTelegram, kodwa uyazi ukuba eli qonga lingantoni kwaye liyintoni? Nantsi into esiza kuyichaza ngemisebenzi esisiseko esiyinikwa sisicelo sokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza.
I-Telegram sisicelo esikuvumela ukuba uthumele kwaye ufumane imiyalezo ngokukhawuleza kwaye nangoko, nokuba siphi. Ngeli qonga, abasebenzisi banokugcina ukunxibelelana kwaye babelane ngalo naluphi na uhlobo lweefayile.
Kodwa ngaphaya komsebenzi wokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza, I-Telegram isinika ezinye iindlela ezintle Kwaye apho izigidi zabasebenzisi kwihlabathi liphela zikhuthazwa ukuba zikhuphele usetyenziso:
Unako yenza amaqela oluntu nawabucala
Unokukhetha uku Rhuma kumajelo
Unako fikelela ekuthiwa zi-bots
Unokwenzeka sebenzisa isicelo njengenkqubo yokugcina
Indlela yokubhalisa kwiTelegram
Ngaba sele uzimisele ukwenza iakhawunti yeTelegram? Iindaba ezimnandi. Kodwa ngaphambi kokuba uthathe elo nyathelo libalulekileyo kuya kufuneka ukhuphele usetyenziso, nokuba kukwiselfowuni yakho okanye ukuba ukhetha ikhompyutha. Ukukhuphela simahla kwaye kulula kakhulu ukukwenza.
Unokuzikhuphelela usetyenziso nasiphi na isixhobo. Into ekufuneka uyenzile kuku ngenisa ivenkile yosetyenziso yenkqubo yakho yokusebenza kwaye ubhale igama "iTelegram" kwibar yokukhangela: Khetha ukhetho oluchanekileyo kwaye ucofe ukufaka.
Ukuba ufuna ukukhuphela usetyenziso kwikhompyuter yakho Ungayenza ngokuthe ngqo kwiqonga elisemthethweni leTelegram. Apho isistim iya kubonisa amanyathelo ekufuneka uwalandele.
Ngaba sele usikhuphile isicelo? Ngoku sihamba kunye nerekhodi
Ukukhuphela usetyenziso linyathelo lokuqala ekufuneka silithathile ukuze wenze iakhawunti yeTelegram. Ngoku ukuba siyikhuphile, siya kuqhubeka ukucacisa inyathelo ngenyathelo ukwenza iakhawunti kule sicelo sodumo somyalezo.
Cofa ku "Qala"
Kuya kufuneka bonisa inombolo yakho yefowuni kunye nekhowudi yelizwe apho uza kubhalisa khona eqongeni.
Kwimizuzwana embalwa uza kufumana ifayile ye ikhowudi ngeSMS kule nombolo uyikhombileyo ngasentla.
Indawo ikhowudi kwibhokisi eboniswe yinkqubo
Iakhawunti yakho yenziwe ngempumelelo
Gcwalisa idatha yobuqu
Siphantse sigqibe, kodwa ngaphambi kokuqala ukusebenzisa isicelo kubalulekile ukugcwalisa ulwazi oluthile iqonga lisicela ukuba:
Kufuneka ubonise igama lakho (kunyanzelekile) kunye nefani (ukhetho)
Unako khetha ifoto yeprofayili (ukuba unqwenela)
Ya ungaqala ukusebenzisa isicelo.
1 Yocingo: Yenzelwe ntoni
2 Indlela yokubhalisa kwiTelegram
3 Ngaba sele usikhuphile isicelo? Ngoku sihamba kunye nerekhodi
Uyikhuphela njani imifanekiso kwi-twitter?